Liverpool iyo Manchester City maxaa kala heysta maanta, yaase qaadi doona koobka?… – Hagaag.com
Liverpool iyo Manchester City maxaa kala heysta maanta, yaase qaadi doona koobka?…
Posted on 12 Maajo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Liverpool ayaa raadineysa inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee koox hogaanka heysa in ay ka kor qaado koobka Premier League Ingriiska maalintii ugu danbeysay ee horyaalka, iyadoo Manchester City ay hal dhibic hogaanka ku heyso.
Liverpool ayaa ku jirta kaalinta labaad, kulankoodii ugu danbeeyay ee gurigooda Anfield oo ay la ciyaari doonaan Wolverhampton (Wolves), halka City ay ciyaari doonto kulankeedii ugu dambeeyay ee banaanka gurigooda ee guriga Brighton, dhammaan kulamada ayaa wada bilaaban doona hal waqti oo maanta oo Axad ah.
Xilli ciyaareedkan waa kii sideedaad ee taariikhda horyaalka Ingariiska, oo weli laalaada koobka ilaa kulankii ugu dambeeyey, inkastoo City hal dhibac ku hogaamineyso, laakin weli waxaa suurtagal ah inay dhibco lumiso.
Liverpool ayaa rajeyneysa inay ku guuleysato horyaalka iyagoo aanan horyaalka qaadin tan iyo 1990kii, isla markaana waxaa u dheer shaqo muhim ah ee Champions League oo ay kula kulmi doonto Kooxda Tottenham.
Xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa mid ka mid ah tartanada ugu kulul ee horyaalka, iyadoo City ay badisay 13kii kulan ee ugu dambeeyey, halka Liverpool ay badisay sideed kulan oo isku xigta, guuldarada kaliya waxay ka soo gaartay City. Laakin labadada kooxood ayaan khasaare la kulmin tan iyo bishii Jannaayo.
City ayaa leh 95 dhibcood, waxaana ku xiga Liverpool oo leh 94 dhibcood, taasi ayaa ka dhigeysa Reds kooxda ugu dhibcaha badan oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Ingariiska taariikhda.
Liverpool ayaa rajeyneysa inay City laga badiyo ama xitaa barbaro la gasho Brighton, oo kaalinta 17aad ku jirta, halka Liverpool laga rabo in kooxda Wolves oo kaalinta todobaad ku jirta ay ka badiso, haddii Reds bareejo la gasho Wolves oo xataa City laga badiyo, weli waxaa koobka qaadaya City oo farqiga goolasha ku soo baxeyso.
Liverpool ayaa heysata fursad maadaama laacibiintooda niyadooda aad u sareyso kadib markii ay soo gaareen Finalka Champions League oo ay garaaceen Barcelona oo miisaankeeda la ogyahay.
Dhinaca kale City iyo tababare Pep Guardiola ayaa rajeynaya inay noqdaan kooxdii ugu horeysay ee Ingiriis ah oo ku guuleysata seddex koob oo maxalli ah hal xilli ciyaareed oo keliya, City ayaa wajihi doonta kooxda Watford FA cup-ka ee Ingariiska maalinta sabtida soo socota.